Toetr’andro: miala any ny rivodoza Desmond | NewsMada
Toetr’andro: miala any ny rivodoza Desmond
Nivadika ho rivodoza ilay faritra andro ratsy ao amin’ny lakandran’i Mozambika. Lasa Tempête tropicale modérée i Desmond. Mitondra rivotra manodidina ny 95km/h izy io. Omaly tamin’ny 3 ora tolakandro, tany amin’ny manodidina ny 500 km avaratra andrefan’i Toliara no nisy ny ivony. Raha ny tomban’ireo mpamatatra ny toetr’andro, hiditra ao Mozambika izy io afaka 48 ora eo.
Mila mitandrina ireo mpampiasa ranomasina amin’ny ilany andrefana sy atsimo andrefana satria hihamafy ny fitsokan’ny rivotra.
Etsy andaniny, misy ny tangoron-drahona ao atsinanan’Antalaha. Hitondra orana betsaka any amin’ny tapany avaratry ny Nosy io tangoron-drahona io. Heverina hivoaka an-dranomasina, anio ao amin’ny lakandranon’i Mozambika, ihany koa izany. Ahina hivadika ho rivodoza ihany koa ity andro ratsy ity rehefa any an-dranomasina.
Mila mitandrina ireo mpampiasa ranomasina any an-toerana noho ny hamafin’ny rivotra. Mailo koa ny mponina amin’ny mety ho fiakaran’ny rano, indrindra amin’ny faritra iva sy ny mety ho fihotsahan’ny tany.
Mahazo fampitandremana loza mitatao miloko mena ny any amin’ny tendrony avaratry ny Nosy amin’ny habetsaky ny rotsak’orana. Filazana loza manambana miloko mavo kosa ho an’ny faritra Boeny, ny faritra Betsiboka, ny faritra Melaky, ny faritra Bongolava ary ny faritra Analamanga.
Eto Antananarivo, hitohy ny rotsak’orana, indrindra ny hariva sy ny alina. Mila mitandrina ireo mponina amin’ny fiakaran’ny rano. Toraka izany ireo mipetraka amin’ny toerana tsy azo antoka amin’ny mety ho fihotsahan’ny tany sy ny vato mitatao.
Tamin’ny asabotsy teo, hatreny amin’ny lohalika ny rano teny Antanimena sy teny Behoririka iny. Tafiditry ny rano hatrany anatin’ireny fiara tsy mataho-dalana ireny. Nanaporofo izany fa niakatra ny rano vokatry ny ora-mikija.